बढ्दै पागलहरुको संख्या | चितवन पोष्ट दैनिक
बढ्दै पागलहरुको संख्या
२०७१ फाल्गुन १४, बिहीबार ०१:३३ गते
नांगै हिँड्ने, जे भेटिन्छ त्यही मुखमा हाल्ने, ढुंगा, लौरो, फलाम वा कुनै पनि हतियार भेट्नेबित्तिकै छेउछाउमा बसेका मान्छेहरुलाई झटारो हान्नेलाई मात्रै यो दुनियाँले पागल भन्ने गरेको छ, तर यो भनाइ आधामात्रै सत्य हो । पागलका प्रकारहरुमध्ये यो खालको पागल एउटा खालको मात्रै हो । त्यो खालको पागल त मात्राको हिसाबले पूरा पागल हो । पूरा पागलले मानवसमाजलाई उतिसारो दुःख दिँदैनन्, जति आधा पागल वा तीन भाग वा एक भागमात्रै पागल भएकाले दुःख दिन्छन् । पहिले–पहिलेको तुलनामा हिजोआज पागलहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको यस रोगलाई उपचार गरिरहेका चिकित्सकहरु बताउँछन् । मान्छे किन पागल हुन्छ ? पागल कति प्रकारका हुन्छन् ? चिकित्सकहरुले तोकेरै जवाफ दिन नसके पनि मान्छेले जन्मैदेखि ल्याएका केही असाधारण शारीरिक अवस्था र हुर्किने क्रममा मान्छेहरुद्वारा गरिने उच्च नकारात्मक व्यवहारका कारणले पागलपन सिर्जना हुँदोरहेछ ।
एकथरी मान्छे जो बाल्यकालदेखि नै साना–साना कुरामा समेत अचाक्ली रिसाउने, अगाडि जे सामान पायो त्यही फ्याँक्ने, फोर्ने, छेउमा बसेका मान्छेलाई चिथोर्ने, आफ्नै टाउकाको कपाल लुछ्ने, अरुलाई थुक्ने, आफ्नो भनाइमात्रै ठीक र अरुले भनेको जति सबै गलत भन्ने व्यक्ति हुर्किएर ठूलो भएपछि समेत उसले त्यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिने र त्यस्ता गतिविधिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समाजमा गतिलो स्थान नमिल्ने, तिनै गतिविधिका कारण शैक्षिक र बौद्धिक विकासमा बाधा पर्न जाने, अरुले सम्मान दिऊन् भन्ने मनमा चाहना पलाउने तर समाजका अन्य व्यक्ति र वर्गले सम्मान दिने अवस्था नहुने र त्यसकै कारण मनमा दिक्क लाग्ने, यसको मात्रा बढ्दै जाने, मात्रा बढ्दा डिप्रेसन हुने, डिप्रेसन भएपछि जिन्दगीदेखि वाक्क लाग्ने र आत्महत्या गर्ने सोच पलाउने, आत्महत्या गर्ने मौका ढुकेर बस्ने, यस्तो रोग लागेको सम्बन्धित व्यक्तिले सुइँको समेत नपाउने हुँदा परिवारका कुनै सदस्य वा मान्छेको शरीर लिएर मान्छेकै चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको कुनै व्यक्तिले मनोरोग विशेषज्ञलाई ठीक समयमा जँचाएर ओखती खान सुरू गर्ने हो भने लामो समय ओखती सेवनपछि बिरामी सद्दे हुने अवस्था आउँदोरहेछ । तर, रोग छिप्पिइसकेको र अरु कसैले थाहा नपाउने अवस्थामा त्यो खालको पागलपनको शिकार व्यक्तिले कुनबेला आत्महत्या गर्छ, कसैले भन्न नसक्ने अवस्था हुँदोरहेछ । जन्मैदेखि सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा चित्त दुखाउने र झगडा गर्ने यो खालको पागलपनका शिकारहरुको अवस्था यस्तो हुँदोरहेछ भने जीवन जिउने क्रममा मनमा पलाएका इच्छा र ती इच्छाहरु पूरा नहुँदा बढ्ने निराशा र त्यो निराशाको लामो अवधिले सिर्जना गर्ने पागलपन ज्यादा मान्छेहरुमा देखा पर्दोरहेछ ।
मानवशरीरमा आएकाहरु स्वाभाविक रुपमा भौतिक सुखसुविधा चाहन्छन् । यतिबेलाको आधुनिक समाजमा भौतिक साधन जुटाउने प्रमुख भूमिका विश्व मानवले पैसालाई दिएको छ । यसकारण संसारका सबै मान्छेहरु पैसाको पछाडि कुदेका कुद्यै छन् । यो पैसाको पछाडि कुद्नेहरु सबै सफल हुँदैनन् । असफलहरु स्वतः निराश हुन्छन् भने सफल भएकाहरु पनि केही समयपछि प्रकृतिको नियमअनुसार तल झर्छन् । आज पैसा कमाएर सफल भएकाहरु, नाम कमाएर सफल भएकाहरु त्यही नाम र त्यही धनमा लामो समय नअडिन पनि सक्छन् । माथि उक्लिएपछि तल ओर्लिनै पर्छ । तर दुर्भाग्य ! आफूलाई निकै सभ्य, विकसित र उच्च ठान्ने मान्छेले यो प्राकृतिक सत्यलाई कहिल्यै स्वीकार्न चाहन्न । सधैँभरि उच्च स्थान र मानसम्मानमा बसिरहन, टिकिरहन चाहने मान्छे आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सफल हुँदैन । त्यसकारण, त्यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो इच्छा पूरा नहुँदा चरम निराशा र चिन्ताको दलदलमा फस्न पुग्छन् र त्यही निराशाबाट पागलपन देखा पर्छ र गन्तव्य आत्महत्यासम्म हुन्छ ।
भारतीय सिनेमा उद्योगमा ८० को दशकमा एक चर्चित हिरोइन थिइन्, परवीन बाबी । उनको समयमा उनी यति चर्चित र सिनेमा हेर्ने दर्शकहरुका लागि यतिसम्म प्यारी थिइन् कि उनले समर्थकहरुका हत्केलामा कलमले ‘परवीन बाबी’ लेख्न पनि भ्याउँथिनन् । उनले प्रकृतिको वरदानस्वरुप पाएको शरीर निकै सुन्दर थियो । त्यो शरीरमा नृत्य गर्ने गजबको कला पनि थियो । गोरो छाला, मन्द मुस्कान, मृगका जस्ता आँखाले उनको भारतभरि जादु चलेको थियो । उनी खुशीले दंग थिइन् । तर, उनको यो खुशीको आयु लामो रहन सकेन । उनको शरीरको छाला चाउरिन थाल्यो । चम्किएको अनुहार मधुरो देखिन थाल्यो । सिनेमा निर्माताहरुले उनलाई हिरोइनका रुपमा स्वीकार्न छाडे । उनको हाईहाई घटेर शून्यमा झ¥यो । यो अवस्थाको कहिल्यै कल्पना नगरेकी उनलाई आफ्नो शान–शौकत घटेकोमा निराशा बढ्यो । उनी घरबाट बाहिर निस्किन छाडिन् । घरमै बसेर टोलाउन थालिन् । बाटो हिँड्नेहरुले एक दिन उनको घरको ढोकाअगाडि प्रत्येक दिन छाडिएको पत्रिकाको थुप्रो देखे । केही दिनदेखि ढोका नखोलिएको प्रमाण थियो त्यो । प्रहरीले ढोका खोलेर हेर्दा परवीन बाबीलाई मृत फेला पारे । हिजोआज पनि कसैले भन्न सकेको छैन, उनको मृत्यु कसरी भयो । मनोरोग विशेषज्ञहरु चाहिँ यसै भन्छन्, “उनलाई आफू तल झर्न परेका कारण डिप्रेसन भयो र उनले आत्महत्या गरिन् ।
त्यही देशमा एक जमानाका चर्चित सुपरस्टार थिए, राजेश खन्ना । उनलाई हेर्न र छुनमात्रै पाए स्वर्गको चाहना गर्नेहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको ठान्थे । युवतीहरु त यतिसम्म हुरूक्क थिए कि राजेश खन्ना चढ्ने कारमा युवतीहरुका ओठका लिपिस्टिकका सयौँ निशानीहरु भेटिन्थे । तिनले राजेश खन्नाका ओठ वा गालै भेटेका भए के हुन्थ्यो होला ? राजेश खन्नासँग पैसा थियो, इज्जत थियो । भारतभरि राजेश खन्नाको नाम थियो । तर, आखिर प्रकृतिको नियमअनुसार जे हुनुथियो त्यही भयो । राजेश खन्नाको सिनेमा हेर्ने अमिताभ बच्चनहरु सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गरेपछि बिस्तारै–बिस्तारै राजेश खन्नाको भाउ ओरालो लाग्दै गयो । शारीरिक हिसाबले बूढा पनि हुँदै गए राजेश । पछि उनी सिनेमा उद्योगमा बिक्न छाडे । बिके पनि उनको इच्छा र भाउअनुसार बिकेनन् । उनमा पनि डिप्रेसन नामको पागलपन देखा प¥यो । उनी पनि घरैमा थन्किए । निकै लामो समय बिरामी भएर उनी बिते । यस्ता पद, नाम र पैसा कमाएकाहरु यही तरिकाले तल झर्छन् र डिप्रेसन नामको पागलपनको शिकार हुन्छन् । कोही आत्महत्या गरेर मर्छन्, कोही पागलपनका कारण सिर्जना हुने अन्य रोगका कारण दुःखी जीवन बिताएर मर्छन् । यस्ता केही उदाहरणहरु अरु पनि प्रशस्तै दिन सकिन्छ ।
एकपटक देशको राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सधैँभरि राष्ट्रपतिका रुपमा रहन सक्दैन । राष्ट्रपति पदमा छँदा जुन शान–शौकत हुन्छ, त्यही शान–शौकत जीवनभरि खोज्ने प्रयास कसैले ग¥यो भने उसलाई पनि डिप्रेसन नामको पागलपन देखा पर्न सक्छ । निजामती कर्मचारीतर्फबाट मुख्य सचिव भएको व्यक्ति, सेनाबाट सेनापति भएको व्यक्ति वा प्रहरी सेवाबाट प्रहरी महानिरीक्षक भएको व्यक्तिले सेवाबाट निवृत्त भएपछि पहिलेकै जस्तो मानसम्मान पाउन सक्दैन, यो सत्य हो । तर, यो सत्य स्वीकार्ने चिन्तन विकास गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले सकेन भने र पहिलेकै जस्तो इज्जत र मर्यादा पाउने आशा राख्यो भने उसलाई पनि डिप्रेसन नामको पागलपनले समात्न सक्छ । थप उदाहरणका रुपमा ठूलो आर्थिक कारोबार गर्नेहरुलाई पनि लिन सकिन्छ । चाहेर वा नचाहेर करोडौँ आर्थिक कारोबार गर्नेहरुलाई समाजमा निकै सम्मानका साथ जी–हजुर गरिन्छ । अवसरवादी समाजले हिजो थुक लाएर हजार र पाँच सयका नोट गन्नेहरुलाई कथंकदाचित आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अनुमानमात्रै ग¥यो भने सम्मान गर्न छाड्छ । त्यही सम्मानको लोभमा हिजोको धनी भौँतारिन्छ र त्यो नपाउँदा पागलपनको शिकार हुन्छ । सयौँ होइन, हजारौँ प्रमाणहरुले यही सत्यको जानकारी दिएका छन् ।
त्यसकारण, यस्ता माथिका उदाहरणका अलावा अरुको भौतिक उन्नति देख्दा डाहा गर्ने बानी, मेहनत नगरी सम्मान पाउने आशालगायत सम्पूर्ण नकारात्मक चिन्तनले मान्छेलाई डिप्रेसन नामको रोगले खर्लप्पै गाँज्छ । जन्मजातै शरीरले ल्याएको पागलपनका बीउहरुलाई उपचारद्वारा निस्तेज पार्न सकिन्छ भने अज्ञानताका कारण अनेकथरीका इच्छा पाल्दा र त्यो पूरा नहुँदा मान्छेमा पागलपन बढ्छ । पागलपनको उपचार अरु होइन, सत्यको ज्ञान हो । सत्यको ज्ञान भनेको धन, सम्पत्ति, पदमात्रै होइन, सुख चाहना गर्ने शरीरसमेत एक दिन नासिएर जान्छ भन्ने बुझ्नु हो । यदि यो सत्य बुझ्ने हो भने धन र पद अनि क्षणिक शारीरिक सुखका लागि मान्छेले मरिहत्ते गर्न छाड्छ र आफू सुखी हुने बाटोमा हिँड्दा अरुलाई पनि त्यही बाटोमा हिँडाउन सक्छ । लौ, अब यही प्रयास गरौँ, पागलपनबाट छुटकारा पाऔँ ।